Weebụsaịtị ígwé ojii: Wulite saịtị WordPress Elementor gị na Bochum raara onwe ya nye nke ọma | Martech Zone
Weebụsaịtị Cloud Elementor: Wulite saịtị WordPress Elementor gị na Bochum raara onwe ya nye nke ọma
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, a na m enyere onye ahịa aka n'ịkwalite weebụsaịtị ha wuru na WordPress na iji Onye Nrụpụta Elementor… nke m kwenyere na ọ bụ nke kacha mma ị nwere ike ịchọta. Edepụtara ya dị ka otu n'ime m plugins WordPress kwadoro.
N'otu oge, Elementor Builder bụ nnukwu ihe mgbakwunye na isiokwu ọ bụla. Ugbu a, onye na-ewu ụlọ enwetala ike nke na ị nwere ike wulite ihe ọ bụla site na isiokwu ahụ n'ihi na ọ nwere nnukwu ọbá akwụkwọ nke ibe na nhazi isiokwu. Na ihe karịrị +100 wijetị dị ịtụnanya na ndebiri 300+, ị nwere ike ịmepụta ụdị weebụsaịtị ọ bụla ị nwere ike iche n'echiche. Elementor dakọtara na WooCommerce dị ka nke ọma.
WordPress nwere ike ịbụ nnukwu mgba iji dozie nsogbu na idozi mgbe enwere nsogbu. Ọ bụrụ na saịtị WordPress gị na-enwe nsogbu, onye ọbịa gị ga-atakarị isiokwu gị ụta, nkwado isiokwu gị ga-ata ụta plugins gị mgbe mgbe, yana nkwado ngwa mgbakwunye gị nwere ike ịta ndị ọbịa gị ụta… ọ nwere ike were obere mgbalị iji kpọtu isi okwu ahụ. wee nweta mkpebi. Iji mee otú ahụ, ị ​​ga-enwe ahụmahụ na-emepe emepe na mmejuputa WordPress… nke meriri ebumnuche nke iji ihe ngwọta ndị a na-apụ apụ.
Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ijikọta Bochum, nkwado ndabere na mpaghara, isiokwu, na ngwa mgbakwunye na-akwado ihe niile na otu ngwọta dị ọnụ ala? Ị nwere ike…
Na-ewebata Weebụsaịtị Elementor Cloud
Elementor enweela nnukwu mmụba n'ihu site na ịmalite ikpo okwu nnabata nke ya, Elementor Cloud.
Ị nweta uru niile nke Elementor Pro, na nkwado maka ihe niile site na onye nchịkọta akụkọ ruo na nnabata:
Ọnụ ego kwa afọ bụ $99 na-enweghị ego zoro ezo
Bochum arụnyere na Google Cloud Platform
Chekwa CDN nke Cloudflare
Asambodo SSL efu site na Cloudflare
Nchekwa 20 GB
Ngwudata bandwit 100
Nleta 100K kwa ọnwa
Njikọ ngalaba omenala efu
Subdomain efu n'okpuru elementor.cloud
Ndokwa akpaaka otu ugboro kwa awa 24
Mkpọchi saịtị ka idobe webụsaịtị na-aga n'ihu na nzuzo
Nkwado akwụkwọ ntuziaka sitere na Elementor m akaụntụ
Enwere ike ijikwa ihe niile site na Elementor m dashboard. Nke ahụ bụ ebe ị nwere ike ịnweta dashboard WordPress gị, jikọọ ngalaba omenala, tọọ ngalaba isi gị, gbanye ma gbanyụọ saịtị, jikwaa nkwado ndabere na mpaghara, weghachite webụsaịtị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, yana omume ndị ọzọ bara uru.
Weebụsaịtị Elementor Cloud bụ nhọrọ dị oke mma maka ndị na-emepụta weebụ bụ ndị chọrọ ilekwasị anya na ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ dị mfe, ebe ha na-enweta ngwọta njedebe na-efu ọnụ n'okpuru otu ụlọ. Ọzọkwa, ọ dị mma maka onye ọ bụla na-ewu ebe nrụọrụ weebụ maka ndị ahịa, ebe ọ na-eme ka usoro ntinye aka kwụ ọtọ ma na-eme ka mmezi dị mfe.
Nweta Weebụsaịtị Cloud
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ maka Elementor, Elementor m, na Weebụsaịtị Elementor Cloud ma na-eji ihe ndị a na njikọ njikọ ndị ọzọ n'ime akụkọ a.
Tags: kasị mma wordpress pluginselementorígwé ojii elementorwebụsaịtị elementor Cloudihe ngosi progoogle igwe ojii n'elu ikpo okwuelementrị monye na-ewu ibeSSLwoocommerceWordPressndabere wordpressakwụkwọ ntinye akwụkwọndebiri wordpresswordpress wijetị